လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက် - အများပိုင်သတင်း။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B Marketplace သတင်း
အမျိုးအစား: လက်ကား & B2B စျေးကွက်
Headless Commerce - အွန်လိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်အနာဂတ်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 3, 2021 ဇြန္လ 3, 2021 Baljinder Kaur	မှတ်ချက် Leave
Smart voice assistants များသည်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုစုဆောင်းနေကြသည်။ Amazon dash ခလုတ်များသည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုမြန်ဆန်စွာမှာယူမှုပြုလုပ်နေသည်။ IoT သည်စားသုံးသူများ၏ဘဝများကိုချုပ်တည်းထားသည်။ သုံးစွဲသူများသည်အကြောင်းအရာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စားသုံးနေခြင်းကြောင့်ရိုးရာ eCommerce ပလက်ဖောင်းများသည်သုံးစွဲသူများကိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်ကြိုးပမ်းသည်။
ထို့ကြောင့်ကုန်သည်များသည် IoT ကိရိယာကိုဒီဇိုင်းမပါဘဲဆံပင်ဆွဲဆောင်မှုကိုမည်သို့ရှောင်ရှားနိုင်မည်နည်း။ ကုန်သည်များအနေဖြင့် back-end ဖြေရှင်းချက်မလိုဘဲဆုလာဘ်များကိုမည်သို့ရိတ်သိမ်းနိုင်သနည်း။ အဖြေမှာတည်ရှိသည် headless စီးပွားကူးသန်း.
ဇြန္လ 3, 2021 ဇြန္လ 2, 2021 Pooja Agrawal	မှတ်ချက် Leave
အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေဖြင့်သင်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချရန်စဉ်းစားလိမ့်မည်။ သင်တို့မူကား၊ လူအများစုကစာရင်းကိုင်တာကိုပခုံးပေါ်ထမ်းဖို့ပဲ။ ဤနည်းဗျူဟာသည် ၄ ​​င်းတို့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာရင်းကိုင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်စာရင်းကိုင်တစ် ဦး ကိုငွေမပေးရသောကြောင့်လျောက်ပတ်သောငွေများကိုသက်သာစေသည်။
Facebook Widget ကို Facebook Marketing Technique အနေနှင့်အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးအကြောင်းရင်း ၇
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 2, 2021 ဇြန္လ 2, 2021 Emilio Scott	မှတ်ချက် Leave
လူမှုမီဒီယာသည်ယနေ့ခေတ်စျေးကွက်၏အရေးကြီးဆုံးကဏ္ important တစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်အရာရာတိုင်းကိုရရှိနိုင်သည့်ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်စျေးကွက်သမားများသည်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်နည်းဗျူဟာအသစ်များကိုအမြဲရှာဖွေနေကြသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်အသစ်များကိုရှာဖွေရာတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်လူတိုင်းကိုအလျင်အမြန်ခေါ်ဆောင်သွားသောအကောင်းဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဒါကaထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် Facebook ဝစ်ဂျက် သင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာထဲသို့။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်သင်၏စီးပွားရေးသည် CRM ကိုဘာကြောင့်လိုအပ်ရတာလဲ ၇
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 1, 2021 မေလ 30, 2021 မာရီနီ	မှတ်ချက် Leave
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်း၏အရေးကြီးဆုံးကဏ္ aspects တစ်ခုမှာသင်၏ဖောက်သည်များနှင့်သင်တည်ဆောက်သောဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။ ဒါကဒီဂျစ်တယ်ခေတ်မတိုင်ခင်ကတည်းကဖြစ်ခဲ့တာပါ။ လူတိုင်းချိတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါထက်ပိုပါတယ်။ ထို့ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများသည် CRM software ကိုအကောင်အထည်ဖော်နေကြသည်မှာအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ သင်ထိုသို့မပြုလုပ်ပါကသင်၏ကုမ္ပဏီသည်ကျန်ရစ်တော့မည်။ သို့သော် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်သင်သည်အဘယ်ကြောင့် CRM လိုအပ်ပါသလဲ။ ထွက်ရှာရန်အပေါ်ကိုဖတ်ပါ။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 29, 2021 မေလ 28, 2021 McKenzie ဂျုံးစ်	မှတ်ချက် Leave
အောင်မြင်သောစွန့် ဦး တီထွင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်ရောင်းခြင်းသည်သင်ပိုင်ဆိုင်ရမည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရည်အချင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရောင်းချခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များစွာရရှိခြင်းကြောင့်ရောင်းဝယ်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့သောမျှော်လင့်ချက်ရှိသောစွန့် ဦး တီထွင်သူများစွာရှိသည်။ ရောင်းချခြင်းသည်အနုပညာတစ်ခုလုံးဖြစ်ပြီးမည်သူမဆို၏ကြိုးများကိုသင်ယူနိုင်သည်။ သင်သည်ဤစိတ်ကူးအနုပညာကိုအလွယ်တကူဖောက်ထွင်းနိုင်ပြီးရောင်းဝယ်မှုတွင်ပါ ၀ င်မည့်သင်၏အနာဂတ်ကြိုးပမ်းမှုအားလုံးတွင်လူကြိုက်များနိုင်သည်။
၇။ သင်၏စီးပွားရေးအတွက် IT ၀ န်ဆောင်မှုများ Outsourcing ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
မေလ 28, 2021 မေလ 27, 2021 Rayanne Morriss	မှတ်ချက် Leave
ဒီခေတ်သစ်ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနှင့်အပြိုင်အဆိုင်ဆက်ရှိနေရန်သင်၏အိုင်တီအထောက်အပံ့သည်ခိုင်ခံ့ကြောင်းသေချာစေသင့်သည်။ Outsourcing အိုင်တီ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အားသာချက်များစွာရှိသည်။ အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အသစ်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းရှင်အသစ်အတွက်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ကြီးထွားရန်မျှော်လင့်သောသေးငယ်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်အကျိုးအမြတ်များသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အိုင်တီ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုနေရာချပေးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာ -
Big Data နှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အကြံဥာဏ်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 28, 2021 မေလ 27, 2021 Sheryl Wright	မှတ်ချက် Leave
တကယ်လို့သင်ဟာသင့်ရဲ့ခြေချောင်းတွေကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့ကြီးမားတဲ့ဒေတာကြီးတွေထဲကိုနစ်မြှုပ်လိုက်ရင်မင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအကောင်အထည်ဖော်ရင်းစိန်ခေါ်ချက်များစွာကိုသင်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင်မင်းတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အရ ဟားဗတ်စီးပွားရေးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, များစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဒေတာ - မောင်းနှင်ဖြစ်လာဖို့သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်တဲ့အကြမ်းဖျင်းအချိန်ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူကုမ္ပဏီများစွာသည်၎င်းတို့၏ရည်မှန်းချက်များကိုရိုက်ခတ်ပြီးကြီးမားသောအချက်အလက်များ၏ယဉ်ကျေးမှုဖြင့်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာနေသောကုမ္ပဏီများစွာရှိသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 27, 2021 မေလ 26, 2021 McKenzie ဂျုံးစ်	မှတ်ချက် Leave
ယနေ့သုံးစွဲသူများသည်ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအကြံဥာဏ်တစ်ခုအဖြစ်နှင့်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သောအတွေ့အကြုံများသို့ဗဟိုပြုသည်။ ကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများအတွက်တန်ဖိုးထားသောဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံများကိုတန်ဖိုးထားသူများပိုမိုများပြားလာစေရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည့်လမ်းကြောင်းသစ်။ သင်၏ဖောက်သည်များကို ဦး စားပေးရမည့်နည်းတစ်နည်းမှာဖောက်သည်ကျေနပ်မှုအဆင့်မြင့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ စိတ်ကျေနပ်မှုနိမ့်ကျခြင်းကြောင့်ကုမ္ပဏီများသည်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာဘီလီယံ ၆၀ အထိဆုံးရှုံးနေကြသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 26, 2021 မေလ 25, 2021 Lynda Arbon	မှတ်ချက် Leave
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မှုသည်စိတ်ကူးသစ်တစ်ခုသာမကခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ သမိုင်းကြောင်းအရစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များသည်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစားသုံးသူများ၏ထည့် ၀ င်မှုမရှိဘဲအမြဲတမ်းလွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်သူတို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲလျှောက်ထားရန်အကြံဥာဏ်များကိုသာရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းပြောင်းလဲလာသည်။ ၀ ယ်သူများသည်အထူးသဖြင့်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များတွင်ပြောဆိုခွင့်ရှိသည်။
မေလ 25, 2021 မေလ 24, 2021 ဒေးဗစ်ဂျက်ဆင်၊ MBA	မှတ်ချက် Leave
စက်မှုလုပ်ငန်းတိုင်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းကသဘောတူနိုင်သည့်အရာတစ်ခုရှိပါကကုန်ပစ္စည်းများကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်သင့်တွင်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများရှိရမည်။ ပြtroubleနာကကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရိုးရာသို့မဟုတ်ခေတ်မမီတော့သောနည်းလမ်းများအသုံးပြုသောဖြန့်ဖြူးသူများကိုသာမှီခိုရသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်သော်လည်းဖြန့်ဖြူးသူများစွာနှင့်အတူအလေ့အကျင့်များသည်အမြဲတမ်းအရှိန်အဟုန်မတိုးတက်ပါ။ နေရာများစွာရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွင်အကျပ်အတည်းများဖြစ်ပေါ်နေခြင်း၊ အီးကောမတ်စ်နှင့်ပေါင်းစည်းရန်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများကြောင့်ထောက်ပံ့မှုများကိုဆက်လက်ထားရှိရန်ရုန်းကန်နေရသည်။
တစ် ဦး သင်္ဘောကွန်တိန်နာဘယ်လောက်ကုန်ကျပါသလဲ
မေလ 25, 2021 မေလ 24, 2021 Carlos Whitney	မှတ်ချက် Leave
ကုမ္ပဏီများကပိုများလာပြီးသိုလှောင်မှုပမာဏတိုးလာသည်နှင့်အမျှသိုလှောင်ရန်နေရာတိုးလာသည်၊ ရာသီအလိုက်အချိန်ကာလများအတွင်းစာရင်းအမြောက်အများကိုလက်ခံရရှိသည်၊ အလုပ်ခွင်တွင်အလုပ်လုပ်သည်စသည်ဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိနေကြသည်။ တစ် ဦး ရေကြောင်းကွန်တိန်နာငှားရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူပညာရှိဆုံးဖြတ်ချက်နိုင်ပါတယ်။ ကွန်တိန်နာဈေးနှုန်းများကျဆင်းသွားပါက၎င်းတို့သည်အဆင်ပြေပြီးလက်လှမ်းမီသည်။ ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင်ရွေးနိုင်သည်။
Virtual ဖြစ်ရပ်များအတွက် B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းညွှန်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 25, 2021 မေလ 23, 2021 Murtaza ဟူစိန်	မှတ်ချက် Leave
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်း Covid -19 ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူအရာများစွာသည်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ B2B စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန်သူတို့အတွက်အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဦး ဆောင်လမ်းပြများနှင့်အလားအလာများကိုစုဆောင်းကာ၎င်းတို့ကိုဖောက်သည်များအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်သင်က B2B စီးပွားရေးစျေးကွက်သမားဖြစ်ပါကသင်၌အဖြေရှိသည်။ Webinars၊ ကွန်ဖရင့်များ၊ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများကဲ့သို့သော virtual ဖြစ်ရပ်များကိုကျင်းပခြင်းသည်အလွန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
၄။ သင်၏လုပ်ငန်းပတ် ၀ န်းကျင်ကိုတည်ဆောက်ရန်အားကောင်းသောနည်းလမ်းများ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 24, 2021 မေလ 23, 2021 အဲလက်စ်ဘီလီ	မှတ်ချက် Leave
ယခုချိတ်ဆက်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ သင့်အားမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုမှလွန်ခဲ့သည့်နှစ်ကခွဲခြားထားခြင်းရှိမရှိ၊ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ဖူးလား၊ သို့မဟုတ်သင်လုပ်ဆောင်လိုသည့်အရာများကိုမလုပ်နိုင်ခဲ့လျှင်ယခုပင်ဖန်တီးမှုရရှိရန်နှင့်ရပ်ရွာနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည် မင်းအနားမှာ စီးပွားရေး၌လည်းအလားတူပင်။
သင်၏ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမည်သို့ချောမွေ့စေမည်နည်း - သိကောင်းစရာ ၃ ချက်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 21, 2021 မေလ 21, 2021 McKenzie ဂျုံးစ်	မှတ်ချက် Leave
အကြံပြုသည် Forbes မဂ္ဂဇင်း, ထိရောက်သောထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စနစ်ရှိခြင်းကုန်ကျစရိတ်ကို minimize နှင့်တိုးတက်မှုနှုန်းအရှိန်အဟုန်အတွက်သင့်ကုမ္ပဏီကူညီ။ လျင်မြန်သောနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုမှုများတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းတို့ကြောင့်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ဖြစ်စဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်လိုအပ်သည်။ ကံကောင်းတာကသင့်ကုမ္ပဏီရဲ့ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ဖြစ်စဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေဖို့သင်ဟာအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးနဲ့အလိုအလျောက်နည်းပညာအပါအ ၀ င်နည်းပညာအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 20, 2021 မေလ 21, 2021 အီဗန်မောရစ်	မှတ်ချက် Leave
ဒေတာသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အရေးပါသောအရာဖြစ်သည်။ အချက်အလက်များ၏အရေးပါမှုသည်ကြီးထွားလာသောကြောင့်ကုမ္ပဏီများသည်အချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်၊ စီမံရန်နှင့်စီမံရန်အတွက်ခိုင်မာသောစည်းမျဉ်းမူဘောင်ကိုတည်ဆောက်ရန်အာရုံစိုက်သင့်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကုမ္ပဏီများသည်သက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှသွင်းအားစုများကိုရယူရန်လိုအပ်ပြီး၊ အချက်အလက်အုပ်ချုပ်မှု၏အခန်းကဏ္ play သည်ထိုနေရာ၌ရှိသည်။ ဒေတာထိန်းချုပ်မှုဆိုသည်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိုလှောင်ခြင်းမှသည်ရွေ့လျားခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်သုံးစွဲသူများအားအစေခံရန်အချက်အလက်များကိုရွေ့လျားခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းအထိကျယ်ပြန့်သောအယူအဆဖြစ်သည်။
မေလ 18, 2021 မေလ 16, 2021 Zahra Zakipoor	မှတ်ချက် Leave
Instagram ကိုစတင်ကတည်းကကတည်းကအသုံးပြုသူများသည် Instagram တိုးတက်မှု နောက်လိုက်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌။ သင်သည်ထိုအရာကိုမည်မျှကြာကြာအာရုံစိုက်ခဲ့ပါစေကြိုးစားရန်နည်းလမ်းသစ်များအမြဲတမ်းရှိသည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာမင်းကိုအနည်းဆုံးရစေမယ့်နောက်ဆုံးပေါ် hack တွေအကြောင်းပြောပြမယ် Instagram ကို 1K နောက်လိုက်။ ထိုအခါညှိနေ!
12...5ပို့စ်အဟောင်းများ